June 23, 2020 - PARIJATMEDIA
काठमाडौं- बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यका भित्रनेलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने
काठमाडौं- बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यका भित्रनेलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्न गृहमन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको छ घरधनीले पीसीआर विधिबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण नगरी घरमा प्रवेश गर्न नदिएपछि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा परीक्षण गर्नेको भीड लाग्न थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोधमा गृहले पत्रिपत्र जारी गरेको हो । पीसीआर टेष्टका लागि आउनेहरु बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपत्यका बाहिरबाट आउनेहरुलाई १४ दिनसम्म होम क्वारेन्टिनमा बस्ने र लक्षण देखिएमा मात्र अस्पताल आउने व्यवस्था गर्न गृहमा पत्र पठाएको थियो ।त्यसपछि गृहले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिश्ल्ला अधिकारीहरुलाई स्वास्थ्यको पत्रअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको परिपत्र पढ्नुहोस् स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठ
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौं भित्रिएकाहरुलाई १४ दिन होम क्वारेन्टिनमा राख्न तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गरेको छ । घरधनीले पीसीआर विधिबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण नगरी घरमा प्रवेश गर्न नदिएपछि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा परीक्षण गर्नेको भीड लाग्न थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोधमा गृहले पत्रिपत्र जारी गरेको हो । पीसीआर टेष्टका लागि आउनेहरु बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपत्यका बाहिरबाट आउनेहरुलाई १४ दिनसम्म होम क्वारेन्टिनमा बस्ने र लक्षण देखिएमा मात्र अस्पताल आउने व्यवस्था गर्न गृहमा पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि गृहले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिश्ल्ला अधिकारीहरुलाई स्वास्थ्यको पत्रअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट आउनेहरु १४ दिन अनिवार्य
पाल्पामा पहिराले गाडी बगाउँदा मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो
पाल्पा – तानसेनको सम्मोबारीमा सोमबार पहिराले गाडी बगाउँदा मृत्यु हुने चार जना पुगेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब निरीक्षक मदन गिरीका अनुसार सुरक्षाकर्मीको टोलीले खोजतलासका क्रममा झापा शिवसताक्षी नगरपालिका –८ बुद्धचोकका १८ वर्षीय कुमार तामाङको शव भेटेको हो । घटनास्थलमा मृत्यु भएका दुई र उपचारका क्रममा सोमबार राति अस्पतालमा मृत्यु भएका एक जना गरी तीन जनाको शव परीक्षणपछि आफन्तले बुझेका छन् । झापाका तामाङको आफन्तसँग सम्पर्क भएको प्रनानि गिरीले बताउनुभयो ।रासस
यदि कुनै मासिनको जीवनमा यी ६ कुराहरु प्राप्त छन भने उ कहिल्यै पनि दुःखी हुँदैन । यो कुरा महाभारतको उद्योग पर्वमा उल्लेख छ । श्लोक यसप्रकार छ : अर्थाथमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षट् जीव लोकेषु सुखानि राजन् ।। अर्थ : धन, निरोगी शरीर, सुन्दर पत्नी, मीठो बोल्ने, आज्ञाकारी पुत्र र धनप्राप्त गर्ने विद्या यी ६ कुराले मानिसलाई सुख दिन्छ । १. धन : सुखी जीवनको लागि धन सम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । बिना धनको न नाम रहन्छ, न मान सम्मान नै मिल्छ । परिवारको पालन पोषण गर्नको लागि धनसम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । आजको समयमा शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि पनि धनको जरुरी छ । धन बिना कुनै रोगको उपचार सम्भव छैन । वृद्धावस्थामा पनि धनको ठूलो साहारा चाहिन्छ। यसर्थ मानसम्मान, शिक्षादीक्षा, परिवारको पालनपोषण, र रोगलाग्दा उपचारको लागि धनको अति आवश्यक हुन्छ । २. निरोगी शरी
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आत्मह-त्या पछि बलिउडमा हुने गरेको नातावाद र सिण्डिकेटको बिषयलाई लिएर चर्को बहस शुरु भएको छ।मुम्बईमा ठूलो सिन्डिकेट चलिरहेको छ। त्यहाँ नातावाद हावी छ। सुशान्तलाई बहि-ष्कार गर्ने वा फिल्मबाट निकाल्ने निर्माताहरूवि-रुद्ध आत्मह-त्याका लागि उक्साएको लगायतका आ-रोप लगाउन थालिएको छ। सुशान्तले आत्मह-त्या गर्नु यसैको उपजको रुपमा धेरैले ब्याख्या गर्न थालेका छन्।पछिल्लो समय केही कलाकर्मीहरुले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भइरहेको वि भेद, गुठबन्दी , परिवारवाद तथा नाताबाद (नेपोटिजमको) बिषयमा खुलेर आवाज उठाउन थालेका छन्। पक्कै पनि नातावाद, कृपावाद, बहिस्कारण, सिण्डिकेट, अपमा न, भेदभाव जस्ता कुराले मानिसको मनमा पक्कै चोट पुर्याउँछ।बलिउडमा पनि यस्को प्रभाब परेको छ । बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाले आफ्नो ट्वीटर एकाउन्ट बन्द गरेकी छिन् । आलिया भट्ट ट्रोलकी शिकार भइरहेकी
थाईल्याण्डबाट नेपाल आईपुगिन् पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह
काठमाडौं – पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह थाईल्याण्डबाट नेपाल आईपुगेकी छिन् । उनी मंगलबार छोरा हृदयेन्द्रसहित नेपाल आईपुगेकी हुन् । उनी आज दिउँसो नै नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट त्रिभुवन बिमानस्थल आईपुगेको बताइएको छ । उनी ३ महिनाअघि छोरीहरुलाई भेट गन थाईल्याण्ड गएकी थिइन् । उनका दुई छोरीहरु सिंगापुरमा अध्ययन गरिरहेका छन् । विमानस्थलमा ओर्लिएपछि हिमानी र छोरा हृदयेन्द्र होटल क्वारेन्टिनमा बसेको बतायएको छ। उनीहरुको क्वारेन्टिन व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गरेको जनाइएको छ । केहि समयअघि उनको टिकटक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो । उनी टिकटक भिडियोमा छोरीहरुसँग देखिएकी थिइन् ।
आइतबार आत्मह-त्या गरेका चर्चित बलिउड कलाकार सुशान्त सिंह राजपुतको निधन भयो । उनको निधनले बलिउड तथा उनको परिवार शोकमा डुबेको छ । उनको निधनलाई लिएर मुम्बईमा रहेको ब्रान्द्रा प्रहरीले १५ जनामाथि अनुसन्धान गरिसकेको छ । उनको निधनले बलिउडमा नेपोटिजमको कुरालाई पुन : उजागर गरेको छ । केहीले त्यस्को पक्षमा बहस गरिरहेका छन् भने केहिले विपक्षमा कुरा गरिरहेको छन् । सामाजिक सञ्जालमा सोनम कपुर, आलिया भट्टको फ्यान, फलोवर्स घट्ने क्रम जारी छ भने कंगना रनावतको फलोवर्स बढिरहेको छन् । करण जोहरले उनको ट्वीटर अकाउन्टबाट सबैलाई अनफलो गरे भने सोनाक्षी सिंन्हाले अकाउन्ट नै बन्द गर्नु पर्यो । केही दिन अघि जब सुशान्तको कुकुर उनको फोटो हेरेर रोयो…. भन्दै समाचार सार्वजनिक भएको थियो । आज उनको कुकुरको निधन भएको खबर बाहिर आएको छ । भारतीय मिडियाहरुले उनको कुकुर फज्ड (फूग्गी)क को निधन भएको दाबी ग
कोरोना महामारीले आक्रान्त बनेको बिश्वलाई सम्हाल्न डाक्टरले अग्रपंत्तिमा रहेर काम गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा डाक्टर नर्स लगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्त्तिहरुले आफ्नो योग्दान दिइरहेको छन् । केहि समयअघि चिनका डाक्टर र नर्सहरुले मास्क उतारेपछिको अनुहार भाइरल भएको थियो । धेरैले उनहरुप्रति सहानुभूति प्रकट गरेका थिए । सार्वजनिक भएका तस्विरमा उनीहरुको अनुहारभरी मास्कको निलडाम देखिन्थ्यो । इटालीमा मात्रै धेरै डाक्टरले बिरामीको स्याहार गर्दा गर्दै कोरोना संक्रमणको शिकार भएर ज्यान गुमाए । कन्टेन्ट कपी गर्दा स्रोत खुलाउन नभुल्नु होला : केटिएम दैनिक लामो समयसम्म पीपीई लगाएर काम गर्दा उनीहरुको अवस्था कस्तो हुन्छ ? के तपाईले कल्पना गर्नुभएको छ ? पिपिईले कोरोनाको संक्रमणबाट त बचाउँला तर त्यसको हानी पनि कम छैन । सोमबार ट्वीटरमा अवनिष कुमारले एउटा फोटो शेयर गरेका छन्
वि.सं.२०७७ असार- १०,बुधवार, ई.सं.२०२० जून – २४, शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० दिल्लाथ्व,प्रमादी,उत्तरायण,ग्रीष्म,आषाढ शुक्लपक्ष तिथि-तृतीया , १०:१२ बजे उप्रान्त चतुर्थी,नक्षत्र-तिष्य , १३:४५ बजे उप्रान्त अश्लेषा,योग-व्याघात , १०:१५ बजे उप्रान्त हर्षण, करण-गर १०:१२ बजेदेखि वणिज , २१:३१ बजे उप्रान्त वालव,चन्द्रराशि-कर्कट,आनन्दादि योग-मातंग,सूर्योदय-५:११,सूर्यास्त-१९:०१, दिनमान-३४ घडी ३५ पला। मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) – आमा तथा आफन्त सँग मनमुटाब बढ्ने तथा गलत आश्वासन बाढ्नाले समस्या आउन सक्छ । सवारि साधन तथा टेक्निकल क्षेत्र सँग सम्बन्धित काम गर्दा ख्याल गर्नुहोला । कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । अध्ययनमा अलि बढिनै समय दिएमात्र नतिजा आफुतिर ल्याउन सकिनेछ। बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) – आट तथा पराक्रम बढेर जाने हुनाले व्यापार व्यावसायमा लगानि गरि थोरै भएपनि आम्दान
लकडाउन’ले थाइल्याण्डमा रहेकी पूर्वयूवराज्ञी हिमानी र छो’रा हृदयन्द्र स्वदेश फिर्ता !
काठमाडौं । लकडाउनका कारण थाइल्याण्डमा रोकिएकी पूर्व यूवराज्ञी हिमानी शाह मंगलबार स्वदेश फर्किएकी छन्। थाइल्याण्ड अध्ययन गर्न गएका छोराछोरीलाई भेटन गएकी शाह लकडाउनका कारण ३ महिनादेखि उतै बसेकी थिइन्। नेपाल एयरलाइन्सको विमानले थाइल्याण्डमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काएको थियो । सोही विमानमा हिमानीका आमा छोरा फर्किएको त्रिभुवन विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ। छोरा हृदयन्द्र, छोरीहरु पूर्णिमा र कृतिकासँग हिमानी थाइल्याण्डमा रहदै आएकी थिइन्। छोरीहरु भने उतै भएको बुझिएको छ। नेपाल आएका हिमानी शाह र छोरा हृदयन्द्रलाई नेपाली सेनाको टोलिले होटल क्वारेन्टाइनमा राख्ने भएको छ। केही दिन अघि थाइल्याण्डमा रहदा हिमानी शाहले छोरहिरुसँग बनाएको टिकटक भाइरल भएको थियो।